Somali Ruushka wuxuu isticmaalay mishiinka dhejinta qalabka dhagxaanta
Waraaqda birta ah ee derbiga ah waxay leedahay muuqaal qurux badan iyo midab cad. Waxaa si weyn loo isticmaalaa beerta, warshad, hudheelka, hudheelka, hoolka bandhigga, fasaxyada, dhismayaasha qadiimiga ah iyo villa casri ah.
Qalabka darbiga ah ee ka sameysan biraha duuban ee birta ah ee iibiya biraha duuban ayaa iibiya inta badan iibiya Ruush, kgyzstan, Uzberkistan iyo dalal dalxiis. Waxay jecel yihiin warqad biraha C8 T8 midabkeedu yahay saqafka guriga.
Qodab dusha ka sameysan oo birta ah ka hor inta aan la duubin gariirku waa 1250mm, qalabka wax lagu isticmaalo ee birta la galiyey ee la galiyey.
Qalabka buuxa ee derbiyada biraha ah ee duuban ee ka sameysma biraha mashiinka mashiinka waxaa ka mid ah jimicsi, mashiinka wax lagu sameeyo, nidaamka kontoroolka kombiyuutarka iyo miiska saaran.